२० असार २०७७, शनिबार १८:३६
ओली कुनै बेला झापा आन्दोलनका अगुवा हुन्। पञ्चायती संघर्षका क्रममा १४ वर्ष लामो जेल जीवन बिताएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य मात्र कमजोर भएन, पार्टी राजनीतिमा पनि पछाडि परे। पटकपटक प्रयास गरे पनि उनी सजिलो बाटोबाट पार्टी नेतृत्वमा आउन नसकेको र त्यसका लागि जस्तासुकै कदम चाल्ने मानसिकता राखेको नेताहरुको आरोप छ।
काठमाडौं, लोकपाटी टिप्पणी। जारी स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरुले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेपछि नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर नेकपाका नेता–कार्यकर्ता सार्वजनिक रुपमै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। यसले नेकपाको एकता नै धरापमा पर्ने त होइन ? भन्नेसम्मको बहस प्रारम्भ भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरु भारतसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोजेको भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि नेकपाका नेताहरु थप आक्रोशित बनेका छन्। ९ सदस्यीय सचिवालयमा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामाको पक्षमा छन्। ओलीनिकट मानिएका रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र महासचिव विष्णु पौडेल पनि खुलेर प्रधानमन्त्रीको बचाउमा लागेका छैनन्। ४४ सदस्यीय स्थायी समिति पनि प्रचण्ड–नेपालको पक्षमा देखिएको छ।
सबैतिरबाट एक्लिएपछि प्रधानमन्त्री ओली नझुक्ने बरु पार्टी विभाजन गर्नेसम्मको मनस्थिति बनाएका छन्। उनले अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरुको भेटमा पार्टी विभाजनको खुला चुनौती दिन थालेको नेताहरुको दावी छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति शक्तिमा रहिरहने घुर्की मात्र नभएर सुनियोजित रुपमा आएको उनीहरुको आरोप छ। दुईतिहाई नजिकको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री किन भूइँको टिप्न पोल्टाको खसाउँदैछन् ? यो प्रश्न नेकपाभित्र रोचक चर्चाको विषय बन्न थालेको छ।
पार्टी शक्तिमा आउन उनले गुटबन्दीलाई आदतकै रुपमा विकास गरेका कारण नेकपाको शीर्ष नेतृत्व र प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि गुटको राजनीतिलाई नै प्रिय ठान्ने गरेको कतिपयको आरोप छ। अरुको कुरा नसुन्ने र आफ्नो कुरा हुबहु मान्न दवाव दिने चरित्रका कारण पार्टीका पूराना नेता उनीप्रति रुष्ट बन्दै गए। तर, आफ्ना समर्थकका लागि जेसुकै गर्न तयार हुने कार्यशैलीले उनको वरिपरि अराजनीतिक शक्तिको केन्द्रीकरण बढ्दै गयो। अहिले देखिएको नेकपाको विवाद त्यही कार्यशैलीकै परिणाम भन्नेहरु पनि छन्।
प्रधानमन्त्री ओली विनम्र बन्न सकेको भए, अरुका कुरा पनि सुन्ने कार्यशैली भएको भए, भ्रष्टाचार लगायत सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नगरेको भए उनी यतिबेला सर्वाधिक शक्तिशाली हुन्थे। तर, सबैलाई मिलाएर हिड्न नचाहँदा उनको राजनीतिक जीवन र भविष्य नै चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन आफ्नै पार्टीका नेताहरुले दिएको सुझावलाई समेत प्रतिशोधका रुपमा लिएका ओलीमा लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको भन्नेहरु पनि कम छैनन्।
कसैको कुरा नसुन्ने, अराजनीतिक समूहको चंगुलमा पर्ने, आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई डोमिनेशन गर्ने, राज्यको साधन स्रोत दोहनमा एकलव्य भएर लाग्ने र एक्लै हिँड्न खोज्ने कार्यशैलीका कारण अहिले उनी थप अप्ठ्यारोमा छन्। तर, उनी सहमतिका साथ मिलेर अघि बढ्न चाहेको देखिँदैन। बरु, आफूनिकटका कार्यकर्तालाई सडकको मोर्चामा पठाएर पार्टीभित्रको विवादलाई थप तिक्त बनाएका छन्।
माओवादी केन्द्रसँग एकतापूर्व एमालेमा ओलीको एकछत्र बर्चश्व थियो। पार्टी महाधिवेशनमा झिनो मतले विजयी ओली अध्यक्ष भएदेखि नै पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धी समूहलाई किनारा लगाउँदै गए। एमाले–माओवादी एकतापछि नेकपामा पनि ओलीले त्यही कार्यशैलीको अभ्यास गर्न खोजे, जुन कुरा उनले चाहेर पनि सम्भव थिएन। पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेकै आफूइतरका नेतामाथि उनले गरेको व्यवहारका कारण सबै नेताहरु उनका विरुद्ध उभिने भौतिक परिवेश बन्दै गयो।
नेकपाको विवाद निर्णायक तहमा पुगेको छ। तर, ओलीले मिलेर जान अनिच्छा देखाएको नेताहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्। पार्टीभित्रका नेताहरुले उठाएको राजनीतिक बहसलाई तिक्त बनाउन ओलीले नै भूमिका खेलेको उनीहरुको आरोप छ। संविधान निर्माणको अवधिपूर्वसम्म भारतसँग निकट सम्बन्ध रहेको मानिने ओलीले आफ्नै पार्टीका नेताहरुलाई बदनाम गर्न सुनियोजित रुपमा प्रचार गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको दावी छ।
पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउनु, हठात् संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सदनमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक अन्यौलमा पार्नुजस्ता कारण पनि नेताहरु ओलीसँग चिढिएका छन्। यी सबै घटनाक्रमले ओली पार्टी विभाजनको तयारीमा रहेको नेकपाका नेताहरुको आरोप छ। मिलेर जाँदा पार्टी र सरकारमा शक्तिशाली हुनसक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै ओली किन फुटको बाटो हिँड्न चाहन्छन् ? त्यसबारे अहिले नै अन्तिम विश्लेषण गर्न सकिन्नँ।
ओलीले पार्टी फुटाउने तयारी गरिरहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको विश्लेषण छ। तर, फुटेर जाँदा नेकपालाई त क्षति हुन्छ नै, त्यसभन्दा ठूलो क्षति प्रधानमन्त्री ओली र उनको समूहलाई हुने देखिन्छ। आफ्ना कमजोरी स्वीकार्दा र शक्तिको विकेन्द्रिकरण गर्दा उनी थप शक्तिशाली हुन्थे। तर, उनी प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै नछोड्ने मात्र होइन, आफ्ना गल्तीसमेत स्वीकार्न नगर्ने मनोविज्ञानमा छन्। यही हठका कारण ओलीले सबैथोक भएर पनि सम्पूर्ण शक्ति गुमाउँदै गएका छन्।